Karbaash: Kordhi wax soo saarka, wada shaqaynta, oo isku dar waxsoosaarkaaga wax soo saar | Martech Zone
Ma hubo waxa aan sameyn karno la'aanteed madal iskaashi wax soo saarkeena. Markaan ka shaqeyno faahfaahinta, waraaqaha caddaanka ah, iyo xitaa qoraalada baloogyada, geeddi-socodkeennu wuxuu ka socdaa cilmi-baarayaasha, qorayaasha, naqshadeeyayaasha, tifaftirayaasha iyo macaamiisheenna. Taasi waa dad aad u tiro badan oo ku lug leh inay u gudbiyaan faylasha gadaal iyo gadaal inta udhaxeysa Google Docs, DropBox ama emayl. Waxaan ubaahanahay habab iyo qaabeyn si aan horey ugu sii wadno horumarka tobanaan mashruuc oo socda.
Doqon waxaa si gaar ah loogu dhisay wadashaqeynta nuxurka - oo u shaqeyneysa sidii xarun dhexe oo lagu maareeyo ilaha aadanaha iyo sidoo kale la dhexgalka kaabayaashaada dibadeed. Astaamaha waxaa ka mid ah:
Meeleynta Hawsha - Abaabul wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu dhammaystirto mashruucaaga hal meel. Ujebi yoolalka waawayn qaybo kala geddisan, ku dheji faylasha, oo dejiso taariikhaha lagaa rabo. Si fudud ula soco horumarka guud iyo wax ku biirinta shaqsiyeed.
Isgaarsiinta - @ ku dheh asxaabta aad u baahan tahay si aad shaqada u dhammeysato isla markiiba waxay ku arki doonaan fariintaada saxda ah goobta ay ku shaqeeyaan. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa isticmaaleyaasha ka baxsan shirkaddaada.
Waxsoosaarka Emailka - Hal guji waxaad email ugu beddeleysaa hawl oo dib ugu dir Wrike si tallaabo looga qaado.
Dashboards - Abuur aragtiyo la beddeli karo oo ku saabsan mashaariicda ugu muhiimsan ee ay ku jiraan garaafyada, heerarka shaqooyinka, iyo cusbooneysiinta waqtiga-dhabta ah.
Warfeed - Cusbooneysiinta dhammaan waxqabadka mashruuca waxay bixisaa warbixinno xaalad deg-deg ah waxayna yareyneysaa shirarka iyo xiriirinta emaylka nuskeed si aad diiradda u saarto waxyaabaha muhiimka ah.
Tafatirka Kooxda - Tafatir, wadaag oo ka wada shaqee dukumiintiyada khadka tooska ah iyo waqtiga-dhabta ah kooxdaada.
Koontaroolada marinka - Bixinta heerka saxda ah ee kontaroolada marin u helka, abuurista kooxo adeegsadayaal caam ah iyo xulashada wadaagista feylasha waxay xaqiijineysaa in dadka saxda ah ay helayaan macluumaadka ay u baahan yihiin inay wax ku ool noqdaan.
Qulqulka Shaqada - Waxaad ka dhigtaa mid toos u socodsiiya nidaamkaaga oo aad aragti ugu yeelataa shaqada marxalad kasta. Abuur shaqooyin kuu gaar ah oo shaqo oo kuu gaar ah leh oggolaansho.
Goobaha Gaarka ah - Ku dar meelahaaga gaarka ah ee mashruuc kasta ama hawl kasta oo si sax ah ula soco waxa muhiimka u ah ganacsigaaga.
Management Resource - Isu-dheellitirnaanta ilaha iyo waxqabadka raad raac adoo adeegsanaya shaxda gubashada.
Socda Wakhti - La soco sida waqtiga loogu isticmaalo mashruuc ama xubin kooxeed si loo helo qorshe sax ah iyo maareynta miisaaniyadda.
Isku-darka Is-dhexgalka - Iswaafaji hawlaha iyo dhacdooyinka muhiimka ah jadwal kasta oo ay ku jiraan Kalandarka Google, Kalandarka Muuqaalka, iyo iCalendar.
Codsiyada Macaamiisha - Doqon waxay leedahay labada barnaamij ee loo yaqaan 'Android and iOS Applications' si aad ula socon karto una fuliso howlaha xitaa markaad ka maqantahay miiskaaga.
Si aad u horumariso wax soo saarkaaga, xitaa waad nuqulan kartaa mashruuc, nuqul ka sameynta shaqooyinka iyo xitaa taariikhaha.
Wrike waxay sidoo kale bixisaa iskudhafka Google Apps, Chrome, Dropbox, Box, Microsoft Project, Microsoft Excel, Microsoft OneDrive, SAML, Salesforce, iCal, Zapier, Evernote, Wufoo, HipChat, WordPress, Slack (oo aan jecel nahay), Zendesk, Hubspot, Quickbooks, LinkedIn, Marketo, ProofHQ, Harvest, SurveyMonkey, Okta, iyo Bitium!
Saxiix u noqo Maxkamad Bilaash ah oo ku saabsan Wrike
Kaliya qoraal - waxaan ka faa'iideysaneynaa xiriiriyeyaal ku xiran qodobkan.
Tags: bitayumBoxchromeiskaashiga waxyaabahawax soo saarkahawlaha contentsocodka shaqadasocodka shaqadasanduuqa hoos loo dhigoEvernotebarnaamijyada googleHarvestHipchathubsashoiCalLinkedInsuuqoMicrosoft ExcelMicrosoft OneDriveMashruuca MicrosoftoktaproofqBuugaagta Degdegga ahiibinSAMLdebcinSurveyMonkeyWordPressWrikewufoozapierzendesk